लुम्बिनी विकास बैंकको एजिएम साउन २८ गते, कहिले गर्दै छ बुक क्लोज ? – Insurance Khabar
लुम्बिनी विकास बैंकको एजिएम साउन २८ गते, कहिले गर्दै छ बुक क्लोज ?
प्रकाशित मिति : ७ श्रावण २०७६, मंगलवार ११:४९
लुम्बिनी विकास बैंकको ११औं वार्षिक साधारण सभा साउन २८ गतेहुने भएको छ । साउन ६ गते बसेको कम्पनी संचालक समितिको बैठकले उक्त सभाको मिति तय गरेको हो । सभा अमृतभोग कालिका स्थान काठमाडौंमा हुने भएको छ ।
सभामा बैंकले १७ दशमलव ०७ प्रतिशत बोनस वितरण गर्ने प्रस्ताव पेश गर्दैछ । लुम्बिनीले ३७ करोड ७१ लाख ९७ हजार २३ सय ६ रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्न लागेको हो । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४–७५ को नाफाबाट यो बोनस सेयर दिने घोषणा गरेको हो ।
सभा प्रयोजनका लागि बैंकले साउन २२ गतेदेखि साउन २८ गतेसम्म बुक क्लोज गर्नेछ । साउन २१ गतेसम्म कायम सेयधनीले मात्र बोनस सुरक्षित गर्नेछन् ।
सभामा बैंकले अन्य कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्न वा गाभिन परेमा त्यसको सम्पूर्ण अख्तियारी सञ्चालक समितिलाई दिने प्रस्ताव पनि पेश हुनेछ । यसआधारमा लुम्बिनी पनि मर्ज जान वा एक्वायर गर्न तयार देखिएको छ ।
बैंकले प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्ने अर्को प्रस्ताव पनि पेश गर्दैछ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७४–७५ को वार्षिक प्रतिवेदन लगायत अन्य प्रतिवेदन पारित गर्ने प्रस्ताव पनि पेश हुनेछ । आर्थिक वर्ष २०७५–७६ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति र पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने अर्को एजेन्डा पनि रहेको छ ।
हाल यस बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्ब २० करोड ९७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बोनस वितरणपछि चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ पुग्नेछ ।
राधी विद्युत कम्पनीको संचालकमा ५ जना निर्वाचित
महालक्ष्मी विकास बैंकद्धारा दुर्गा माध्यामिक विद्यालयमा अध्यनरत विधार्थीलाई पोशाक वितरण
नेप्सेमा प्रभु बैंकको शेयर सूचीकृत
एनआईसी एशिया बैंकले गर्यो घातक रोगको उपचार बापत १० लाख रुपैयाँ बीमा रकम भुक्तानी
कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी सुस्त, ३८ हजारले दाबी पाउन सकेनन्
कृषि विकास बैंकको नाफा १६.४४% ले घट्यो
नेरुडे लघुवित्तको बार्षिक साधारणसभा भोलि